Fampitam-baovao sosialy ao amin’ny tontolo Arabo, misy fiantraikany tsara amin’ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2019 4:10 GMT
Nanambara tao amin'ny tranokalany ny Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), tambajotra Arabo manandratra ny fahalalahana miteny hoe:
Misy fiantraikany tsara amin'ny dingan'ny demaokrasia ao amin'ny tontolo Arabo ny aterineto. Tsy voasakan'ny hetsika sivana, fanakanana aterineto sy fisamborana ary koa fampijaliana mpiserasera aterineto ataon'ny governemanta ity hery vaovao ity.
Nilatsaka roa andro talohan'ny namoahana tatitra vaovao avy amin'ny ANHRI mitondra ny lohateny hoe “Tambajotra Sosialy iray, miaraka amin'ny Hafatra Mikomy” ny fanambarana, miresaka momba ny fahalalahana mampiasa aterineto ao amin'ny firenena Arabo miisa 20 ny tatitra, ary koa mandinika fitaovana efatra (Blogs, Facebook, Twitter sy YouTube) izay ampiasain'ny tanora Arabo hampiharana ny zon'izy ireo amin'ny fahalalaham-pitenenana, mampiseho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​manasongadina ny kolikoly sy ny hetsika famoretana ao amin'ny tontolo Arabo.
Mirakitra ny fanitsakitsahana natao tamin'ireo mpampiasa aterineto ihany koa ny tatitra; toy ny fakàna an-keriny, fisamborana, fampijaliana mpampiasa aterineto amin'ny fampiasana Lalàna Vonjy taitra tahaka ny any Ejipta sy Syria. Any amin'ny firenena sasany, tahaka an'i Arabia Saodita, namoaka fanambaràna mandràra ireo tranonkala sasany izay tsy voasakan'ny governemanta ireo manampahefana ara-pivavahana.
Nanamarika ny ANHRI fa teo amin'ireo mpampiasa aterineto, izay nahatratra 58 tapitrisa tany amin'ny tontolo Arabo, ireo mpampiasa aterineto any Libanona, Alzeria sy Somalia ihany no manana fahalalahana amin'ny fampiasana ny aterineto. Ankoatra izay, dia nitombo niaraka tamin'ny isan'ny mpiserasera ny tahan'ny famaizana sy ny fanorisorenana ireo mpampiasa aterineto.
Manohy manakana ireo tranokala ny firenena toa an'i Arabia Saodita, Tonizia ary Syria. Tany Ejipta, na izany aza, nijanona dimy taona lasa izay ny hetsika fanakanana tranonkala, saingy manao ny famoretana any amin'ireo bilaogera sy mpampiasa aterineto indray ankehitriny ny fitondrana ao Ejipta. Manamarika ny ANHRI fa lasa firenena mpanasazy mpiserasera aterineto indrindra ao amin'ny tontolo Arabo i Ejypta.
Ho hita antserasera androany, Alarobia 23 desambra 2009 ny tatitra.